Baaq talo soo jeedina oo ka soo baxey Jaaliyada Somalinad ee dalka Norway. | WWW.SOMALILAND.NO
Baaq talo soo jeedina oo ka soo baxey Jaaliyada Somalinad ee dalka Norway.
Posted on Maajo 14, 2008 by Weriye2
Golaha Guurtida hadii aad tihiin waxaa idinku waajiba in aydaan gacmihiina ku burburin wixii aad dhistaan. Waa inaad ilaalisaan magaca iyo mudnaanta aad umada Somaliland dhexdeeda ku lahaydeen taasi oo aad ku ilaalin kartaan idiinkoo arinta dalka iyo dadkaba ka noqda dhexdhexaad aan dhanaba raacsaneyn. Waxaa aanu aad uga xumaaney hadii aanu nahey qurbajooga Somaliland ee degan dalka Norway, in aydaan weli qaadin talaabo aad ku xalineysaa muranka ka olaasan dalka iyadoo weliba halbowlaha murankaasi uu yahey mudada sanadka ah ee aad u kordhiseen M/weynaha iyo Kuxigeenkisa
Ku:-Madaxweynaha Jamhuriyada Somaliland Mudane Daahir Riyaale Kaahin
Ku:-Gudoomiyaha Xisbiga mucaaradka ah ee KULMIYE Mudane Ahmed Mohamed Mohamud Silaanyo.
Ku:-Gudoomiyaha Xisbiga mucaaradka ah ee UCID Mudane Faysal Ali Waraabe.
Ku:-Golaha guurtida Somaliland
Ku:-Golaha Baarlamanka Somaliland.
Ku:-Gudida Doorashooyinka Somaliland.
Ku:-Waxgaradka iyo Culimaa`udiinka Somaliland.
Hadii aanu nahey jaaliyada reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Norway waxaanu halkan iidinku soo jeedineynaa baaq isugu jira talo iyo tilamaan ku saabsan xaalada cakiran ee maanta uu dalku ku sugan yahey.
Marka hore waxaanu halkan ku cadeyneynaa inaanu xaq u leenahay inaanu ka hadalo oo fikirkayaga aanu ka dhiibano xaalada uu dalku mar kasta ku sugan yahey gaar ahaan marka ay taladu lagama maarmaan tahey. Anagoo oo ka mid dadka Somaliland ee qurbaha ku nool waxaan la dafiri karin in qurba joogu uu yahey mid ka mida mishiinada dalka uu ku socdo waliba hadii runta la sheego uu yahey mishiinka ugu weyn mishiinada. Si kale hadii loo dhigo waxaanu nahey halbowlaha ugu weyn ee daboola baahiyaha bulashada intooda badan.
Somalidu waxey ku maahmaahda raga laba ayaa ugu liita. 1.Nin jooga oo aan la tirin iyo 2.Nin maqan oo aan la tabin. Waxaanu nahey dad maqan oo xaq u leh in la tabo ama taladooda la dhegeysto, anagoo waliba aaminsan inaanu dadka dalkii jooga intoodaba badan uga lexejeclo badan nahey dhibaatada dalka taas oo ay noogu wacan tahey anagoo ku nool dhul shisheeye oo aanu dibadyaal ku nahey.
Waxaa murugo iyo magaxumo nagu haya dhawaaqyada dhiilooyinka xambaarsan ee maalin kasta dhegayahagu maqlayaan kuwaas oo meesha ka saaraya rajadii aanu ka qabney in aanu ku soo noqonoo dhulkagayaga hooyo si aanu ugaga reysano dhibaatada aanu ku qabno dhulalka shisheeye ee aanu martida aan la rabin ku nahey.Hadaba hadii aanu nahey jaaliyada Norway anaga oo isku duuban waxaanu talo ku gaadhney inaanu idiin soo gudbino dhambaalkan oo ah fariin culus oo waliba idinku ah xujo hadii aad tix galin waydeena oo aad dalka iyo dadka wado khaldan ku hagtaan inaad aakhiro iyo aduunba denbigaasi uu dhushiina ahaan doono.
1.Mudane M/weyne mar hadii aad tahey madaxweynihii umada waxaa hubaala in masuuliyada dalka iyo dadka kaa saarani aaney jirin cid kale oo ay saaran tahey. Somalidu waxey ku maahmaahdaa madax meel ka sareysaoo la salaaxaa ma jirto. Hadaba waxaanu kugu adkeyneynaa inaad u dhaga nuglaato rabitaanka dadka meeshana aad ka saarto wax alaale iyo wixii keenaya isku dhac iyo in dalka uu ka dhaco qalaaalase siyaasadeed. Waa in aanad marnaba qaadan dariiqa khaldan ee ah cabudhinta iyo adeegsiga cudud milatari iyo mid Boolisba. Waxaanu kaa codsaneynaa in aad jeexdo dariiq cad oo ah in dalka ay ka dhacaan doorashooyin xalaala oo aad ku kala baxdaan sadexdiina Xisbi Qaran ee dalka ka jiraa. Waxaanu mudane Madaxweyne ku xasuusineynaa inaad tahey Madaxweynaha keliya ee Somaliland ka qabtey sadex doorasho oo hore waxaa markaa magaxumo noqon doonta hadii aad gunta ka jarto geedkii aad beertey oo midhihiisii ay biseyl ku dhaw yihiin.
2. Xisbiyada mucaaradka ah waxaanu marka hore u qireynaa iney xaq u leeyihiin in la fuliyo in doorasho xalaal ahi ay dalka ka dhacdo si ay uga calafkooda uga qaadaan codka iyo rabitaanka dalka, dhanka kale waxaanu ku adkeyneynaa Xisbiyada Mucaaradka ahi iney ka fogaadaan iney kuraasida dalka u maraan dariiq khaldan oo ah burburinta Qaranka curdinka, waxa kale oo aanu kula talineynaa iney ka fogaadaan afxumada iyo hadalada aan loo baahneyn ee xumaanta isu gelinaya bulshada walaalaha ah ee Somaliland. Waxaa waajib ku ah xisbiyada mucaaradka ah in mucaaradooda noqoto mid wax dhiseysa balse aaney noqon mid wax baabineysa. Hubaal dalku dal ahaan maayo hadii arintu noqoto isu fiirsasho iyo is xiniinyo taabad.
3.Golaha Guurtida hadii aad tihiin waxaa idinku waajiba in aydaan gacmihiina ku burburin wixii aad dhistaan. Waa inaad ilaalisaan magaca iyo mudnaanta aad umada Somaliland dhexdeeda ku lahaydeen taasi oo aad ku ilaalin kartaan idiinkoo arinta dalka iyo dadkaba ka noqda dhexdhexaad aan dhanaba raacsaneyn. Waxaa aanu aad uga xumaaney hadii aanu nahey qurbajooga Somaliland ee degan dalka Norway, in aydaan weli qaadin talaabo aad ku xalineysaa muranka ka olaasan dalka iyadoo weliba halbowlaha murankaasi uu yahey mudada sanadka ah ee aad u kordhiseen M/weynaha iyo Kuxigeenkisa. Waxa ay nala tahey in murankaa cida keliya ee dhameyn kartaa ay tahey idinka oo arinta dhan kale uga wareega oo keena xal lagaga gudbi karo muranka cakiran ee u dhexeeya siyaasiyiinta dalka. Waxaanu idiinka digeynaaa in aad gacantiina ku goysaan midhihii aad beerteen iyo milgiihii Somaliland lagu yagleelay.
4.Golaha komiishanka waxaanu iyagana ugu baaqeynaa iney tix geliyaan masuuliyada ay hayaan ee culus kana fogaadaan iyaga laftoodu iney sabab u noqdaan burburka Somaliland. Taasi oo aanu u aragno iney kaga badbaadi karaan iyagoo noqda dad go`aan iyo mawqif dhexdhexaada leh. Waxaa hubaala in hawsha gudida Komiishinku ay tahey hawl adag balse hadii ay daacad iyo dhexdhexaadnimo la yimaadan waxaa hubaal noqoneysa iney kala saari karaan raga uu hayo hunguriga kuraasida ama doonaya in ay musuuliyada dalka dusha u ritaan.
5.Culmaa udiinka, Suldaamada, Aqoonyahanada, Abawaaniinta, Ganacsatada iyo Waxgaradka kelaba waxaanu iyagana ugu baaqeynaa in aaney daawan muranka u dhexeeya Siyaasiyiinta ee waa iney arinta kaalintooda ka qaataan iyagoo markasta yoolkoodu yahey sidii loo badbaadin lahaa nabedgelyada mudada 17 sano ah ka jirtey Somaliland.
Waxaanu ku soo gabagebeynaynaa baaqayaga iney dhaamaantiin waajib idinku tahey in danihiina gaarka ah aad ka horeysiisaan danaha Qaranka, in aad noqotaan qaar isu tanaasula oo damac iyo aduunyo jaceyl aan ugu khamaarin daadinta dhiiga dadka aadka u jilicsan iyo burburinta hantida yar ee yabyabka ah.
Waxaa hubaal noqon doonta in hadii aad mudaca midida ku taagtaan ay arintiinu ku danbeyn doonto ifka oo aad magaxumo ku sii joogtaan iyo aakhiro aad naar dabaalataan. Waxaa iyadana aan muran ka joogin ineynu waayo aragnimo badan u leenahay Qabqablayaal dagaal iyo raga kuraasi isku dila waxaana markhaati inoo filan waxa ka dhacaya Muqdisho iyo koonfurta Somalia.
Jaaliyada Somaliland ee Dalka Norway
« Baarlamanka Yurub oo Kulan ka Yeelanaya Qaddiyadda Dalalka aan la Aqoonsan oo Somaliland ku Jirto War Degdega: Madaxweyne Rayaale Oo Gobol Cusub U Magacaabay Degmada Baligubadle »